Nipoaka ny hatezerana rehefa nambara fa anisan’ny hotiliana voalohany amin’ny COVID-19 ireo mpanao politika Indoneziana · Global Voices teny Malagasy
Nipoaka ny hatezerana rehefa nambara fa anisan'ny hotiliana voalohany amin'ny COVID-19 ireo mpanao politika Indoneziana
Voadika ny 09 Avrily 2020 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, bahasa Indonesia, русский, Français, English
Ny lapan'ny antenimiera any Senayan, Jakarta. Saripikan'i Davidelit. Loharano: Wikipedia (Azon'ny rehetra ampiasaina).
Zahao ny fitantarana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny COVID-19 manerantany.
Mpisera aterineto Indoneziana maro no naneho hatezerana noho ny fanapahan-kevitry ny Antenimieram-pirenena (DPR) hanao fitiliana ireo mpikambana miisa 575 amin'ny COVID-19.
Manana mponina maherin'ny 260 tapitrisa i Indonezia. Tamin'ny 25 Martsa 2020 dia nahitana trangana COVID-19 miisa 790 tao amin'ny firenena ary olona miisa 58 no maty. Saingy maro no mino fa mbola betsaka ny mety efa voa saingy tsy voatatitra na voatily noho ny havitsian'ny fanaovana fitiliana COVID-19 any amin'ireo vondron'olona ireo. Hatramin'ny 24 Martsa, mbola vao fitiliana miisa 2.756 fotsny no vitan'ny governemanta .
Nisalasala tamin'ny hametrahana fihibohana mba hisorohana ny viriosy ny filoha Joko Widodo (fantatra ihany koa amin'ny hoe Jokowi) satria misy fiantraikany lehibe amin'ny sehatra tsy manara-dalàna sy ho an'ireo mitady ny ho haniny isan'andro izany. Sarotiny kosa anefa ny governemanta tamin'ny fanajana ny elanelana ara-batana sy ara-tsosialy tany amin'ireo tanàndehibe mba hampitsaharana ny fihanaky ny COVID-19. Nanome baiko ny fividianana ny fanaovana fitiliana mivaly vetivety ihany koa i Jokowi mba ho entina ampiasaina any amin'ny faritra be olona manerana ny firenena.
Saingy naha-tezitra ny olona maro tao amin'ny tambajotra sosialy ny vaovao farany momba ny fanapahan-kevitry ny DPR tamin'ny hitiliana ireo mpikambana ao aminy rehefa niandry ny fahatongavan'ny fitaovana fanaovana fitiliana avy any Shina sy ny firenena hafa ny firenena. Afaka manendry ihany koa olona roa na telo amin'ny fianakaviany sy ny mpiasa toa ny mpamily ary ny mpanampy an-trano hatao fitiliana mivaly vetivety ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta.
Tezitra ny maro ary nanontany hoe rariny ve raha ireo mpanao politika no laharam-pahamehana hatao fitiliana COVID-19 fa tsy ireo mpiasan'ny fahasalamana na ireo mpikarakara hafa, anisan'izany ireo izay efa misy soritr'aretina ?
Ireto misy tsikera vitsivitsy tao amin'ny Twitter:
Hatao fitiliana COVID-19 avokoa ireo mpikambana miisa 575 ao amin'ny parlemanta sy ny fianakaviany amin'ny alàlan'ny fitiliana mivaly vetivety amin'ity herinandro ity, hoy ny fanambaran'ny Antenimieram-pirenena. Tsy tahaka antsika olon-tsotra fa hatao fitiliana izy ireo na dia tsy mampiseho soritr'aretina na tsy nifandray tamin'ny marary aza.
Raha miady mba hanaovana fitiliana ireo marary manerana ny firenena mandritra ny tsy fisian'ny fitaovana ara-pitsaboana dia hahazo fitiliana Covid-19 maimaimpoana ireo parlemantera Indoneziana rehetra.
Rehefa mahita ireo solombavambahoaka sy ireo mpiasam-panjakana ambony ao amin'ny governemanta mahazo ny fitiliana COVID19 mora foana (na dia tsy misy soritr'aretina aza) dia tahaka ny mahatsapa ny tenako ao amin'ny fanindronan'i Bong Jon Hoo aho. Ary inoana marimarina fa tsy ao anatin'ny lamasinina lohalaharana misy ireo olona sangany isika.
Nizara ny fihetseham-pon'ny maro i Andreas Harsono, mpikaroka momba ny zon'olombelona. Hoy izy tao amin'ny Sydney Morning Herald:
Betsaka ny olona tezitra amin'ireo parlemantera satria na dia ny mpitsabo, ny infirmiera, ny mpamilin'ny fiara mpitondra marary – ireo olona tena akaikin'ny marary – aza dia tsy atao fitiliana. Nampahatezitra mafy ny olona izany. Manamafy ny fitiavan-tenan'izy ireo izany.
Ho valin'izany, nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny DPR fa ny mpikambana ao aminy no nividy ny fitaovana fitiliana. Nilaza ny mpiara-miasa amin'ny antokon'ny filoham-pirenena fa mila atao fitiliana ny mpikambana ao amin'ny DPR “mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny asan'ny governemanta.”
11 ora izayShina